Akshey Kumar Oo Qaab La Yaab Leh U Sharaxay Fariinta Uu Dirayo Filimka Rustom ”Furiinka Ayuu Kasoo Horjeedaa” - Hablaha Media Network
Akshey Kumar Oo Qaab La Yaab Leh U Sharaxay Fariinta Uu Dirayo Filimka Rustom ”Furiinka Ayuu Kasoo Horjeedaa”
HMN:- Aktarka caanka ah ee Akshey Kumar ayaa waxaa uu sheegay in filimkiisa dhawaan tiyaatarada lasaaridoono ee Rustom uu yahay filim dirayo fariin guud oo ay dadka oo dhan anficidoonto waxaana uu sheegay in fariinta ay tahay fariin wacyo gelin ah.
Rustom waa filim uu xembaarsanyahay fariin kasoo horjeeda is furiinka ama kala taga qooyska ,waxaana uu dhiiro gelinayaa in leeys guursado oo qooys la dhiso.
”Waa u jeedo kala duwan, waxaa uu si dhab ah diirada u saarayaa nolosha dhabta ah, waxaana uu dhiiro geliyaa wada noolaanshaha dhabta ah,” ayuu yiri aktarka.
Akshey Kumar ayaa filimkaan ku jilidoona muuqaal gaar ah wuxuuna wataa labis gaar ah waana dharka ciidama bada loogu talagalay.
”waxyaabaha gaarka ah ee aan filimka waxaa kamid ah waxaan xeranahay Unifom, ama labis gaar ah, filimkaan waxaa uu ku wajahanyahay bad baado, wuxuuna bad baadindoonaa qooysas badan, waxaana lagu wacyi gelinayaa qooysaska kala taga.
Akshey Kumar ayaa filinayaa in filimkaan uu u noqdo filimkii seddexaad ee sanad gudihiisa guulo keena waxaana ka horeeyeen filimo kale ee isla sanadkaan uu keenay Aktarka.